वालेन र सुनिताको काठमाडौं महानगर यात्रा(पुष्ठभुमी सहित) – Avenues Khabar
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १७:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौ । वालेन अर्थात् वालेन्द्र साह । हरेक युवा पुस्तामा अहिले लोकप्रिय नाम बनेको छ यो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख बनेका ३२ वर्षीय वालेनको चर्चाले प्रमुख राजनीतिक दललाई चिन्ता बढेको छ । वालेन अहिले युगौंदेखि चर्चा कमाएका राजनीतिक दलहरूका लागि चुनौती बनेको छ ।
साह नेपाली ¥यापर, गीत लेखक, निर्देशक र पेसाले स्ट्रकचरल इन्जिनियर हुन । बुवा रामनारायण साह र आमा कुवदेवी साहबाट सन् १९९० मा जन्मिएका साहका परिवारको पृष्ठभूमि राजनीतिक होइन । उनका बुवा आयुर्वेदिक डाक्टर हुन् ।
साहले ह्वाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटक विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् ।
यस्तै, २०७२ सालको भूकम्पपछि साहले उद्धार र राहतको काममा सक्रिय भएर समाजसेवीको छवि पनि बनाएका थिए । काठमाडौं महानगरको प्रमुखमा जितेर स्वतन्त्रबाट जित्ने महानगर प्रमुखको इतिहास रच्दै छन् ।
वालेनको पुर्खौली घर महोत्तरी जिल्लाको एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा छ । उनका हजुरबुबा मुनिलाल साह तेली गाउँका जमिन्दार थिए । त्यसै कारण उनलाई सबैले ‘महाजन’ भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थे । मुनिलालका चार छोरामध्ये डा. रामनारायण साह र आमा धुव्रदेवी साहको कान्छो छोरा वालेन्द्र साह हुन् ।
डा. रामनारायण करिब चार दशकअघि नै काठमाडौंको सिंहदरबारस्थित आयुर्वेद औषधालयमा चिकित्सकको रुपमा काम गर्न पुगेका थिए । सोही बेलादेखि उनको सपरिवार काठमाडौँमा छ ।
बालेनका बुवा रामनारायणको पहिलो पत्नी रितेश्वरी देवी साह । उनको माइती भारतको मधुवनी जिल्लामा पर्छ । दोस्रो पत्नी कुवदेवी साह अर्थात् वालेनको आमाको माइत जमुनिवास–४ धनुषा हो ।
वालेनको पुर्खौली घरमा अहिले एकडारा गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय छ । स्थानीयका अनुसार, सो घर गाउँपालिका कार्यालयलाई भाडामा दिइएको छ ।
यसबाहेक युवा पुस्ताले रुचाएका सङ्गीतकर्मी तथा ¥यापर साहको राजनीतिक अवतारले पनि कम चर्चा पाएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा पनि साहको निकै चर्चा र सर्मथनमा विभिन्न पोस्टहरु भइरहेका छन् ।
यस्तै, युवा पुस्तामा मात्र नभएर मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि बालेनले उत्तिकै माया पाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा कलाकारहरु पनि खुलेर उनलाई सर्मथन गरेको देखिन्छ ।
अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का, प्रियंका कार्की र निर्माता माधव वाग्ले, सन्तोष सेन, हाँस्य कलाकार निर्मल शर्माले खुलेरै उहाँको पक्षमा लागेका थिए । साहले काठमाडौंको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनका लागि पाँच वर्ष अगाडिदेखि तयारी गरिरहेको भन्ने चर्चा सुनिन्छ ।
यसरी कलाकारबाट राजनीतिमा अगाडि बढ्दै गरेका बालेनले प्रमुख पद जित्नुअघि नै एक वर्षसम्मका लागि २ प्रतिशत कर मिनाहा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले यो घोषणा फिल्म ‘चिसो मान्छे’ को ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका थिए । कार्यक्रममा पुगेका वालेनले नेपाली कलालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजानुपर्ने बताए ।
काठमाडौंलाई अहिले युवापुस्ताको खाँचो रहेको साहका सर्मथकहरु बताउछन् । विगतमा धेरैलाई अवसर दिए पनि आफूहरु सन्तुष्ट नभएको उनिहरुको भनाइ छ । अबका दिन वालेन कला क्षेत्र सँगसँगै राजनीतिमा पनि होमिएर नगरको विकास गरेको हेर्ने सपना रहेको युवाहरुको भनाइ छ ।
¥यापमा राखिएका तिखा शब्दले युवाहरूलाई आकर्षण गर्न जति सहज भयो, महानगरको जेलिएको कर्मचारी प्रशासन, संरचना निर्माण गर्न हरेक पाइलामा अवरोध, एक्लो प्रमुखले अन्य सबै दलको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
भनिन्छ–चर्का कुरा गरेर नेता हुन सजिलो छ तर जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन छ । त्यही कठिन यात्रामा वालेनको महानगर प्रमुखको यात्रा सुरु भएको छ ।
सुनिताको राजनीतिक यात्रा
कसैले रेडियोमा साथी, दिदी, आन्टी वा प्रस्तोता र कतिले मिस नेवा २०११ र कतिले ‘रञ्जना लिपि क्वीन’ भनेर चिन्रे गर्छन् । उनि हुन् सुनिता डंगोल ।
सन् २०११ मा मिस नेवाःको ताज जितेकी सुनिता डंगोल राजनीतिमा नयाँ अनुहार हुन् । सामाजिक विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरेकी उनी विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम र नेपाल भाषाको रञ्जना लिपि प्रवद्र्धनका अभियान्तासमेत हुन् ।
काठमाडौंको लगन टोल निवासी सुनिता ‘सम्पदा बचाउ अभियान’ र केही समय अघिसम्म नेपाल टेलिभिजनमा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्थिन । विभिन्न सामाजिक कार्यमा हात हालेकी डंगोलले काठमाडौंको विकासका लागि आठ खम्बे विकास ढाँचा तयार गरेकी छिन् ।
जसमा स्वच्छ वातावरण अर्थात् फोहोर व्यवस्थापन, यातायात व्यवस्थापन, राजधानीका रुपमा पूर्वाधार विकास, सांस्कृतिक नगर, सामाजिक विकास, डिजिटल काठमाडौं, युवा खेलकुद, रोजगारी तथा उद्यमशीलता र रिसर्च एण्ड डिभेलप्मेन्ट रहेको छ ।
डंगोलले रञ्जना लिपि सिकाउ क्याम्पियन मात्र ६० वटा गरेकी छिन् । सुरुमा डंगोलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र रुपमा प्रमुखमा दाबेदारी गरिरहेको डंगोललाई एमालेले उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनाएको हो ।
यस्तै, उनको मत माग्ने शैलीबाट पनि उनको सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चा छ । अवाज विहीन र सुन्न नसक्नेहरुसँग डंगोलले सांकेतिक भाषामा समेत मतदान गर्न अपिल गरेकी थिइन्, जसबाट उनी सबै माझ लोकप्रिय बनेकी हुन् ।
‘युवा भविष्य मात्र हैन, युवा वर्तमान पनि हो’ भन्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल’ अभियानबाट प्रभावित भएकी डंगोल देशमा विकासको लहर ल्याउन राजनीतिमा आएको बताउँछिन् ।
यस्तै, डंगोलले आफूले जितेको खण्डमा जनताको शासक होइन, सेवक बन्ने एक कार्यक्रममा बताएकी थिइन्। काठमाडौंलाई सांस्कृतिक नगरी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।
उनले नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता कम रहेकाले पनि आफ्नो उम्मेदवारीले अन्य पार्टीहरूलाई पनि महिला नेतृत्व अगाडि ल्याउन दबाब हुनेसमेत बताएकी छिन् । साथै, आफू युवा भएकाले पनि अहिलेको पुस्ताले युवा नेतृत्वलाई विश्वास गर्ने उनी बताउछिन् ।
विद्यालयमा सधैं पहिलो छात्रादेखि राजनीतिसम्मको यात्रामा सुनिता निकै मिहिनेती र लगनशील देखिन्छिन् । सिक्ने, सिकाउने र फैलाउने काममा रुचि राख्ने डंगोल अहिले युवा पुस्तामाझ पनि किनै लोकप्रिय बनेकी छिन् ।
एसएलसीमा बोर्ड टप गर्ने सपना पूरा गर्न चुकेका डंगोल आज काठमाडौं सहरलाई विदेशजस्तो नभएर उसकै स्वरुपमा राम्रो बनाउने सपना पूरा गर्दै छिन् ।
जीवनमा अगाडि बढ्ने बाटो भनेकै शिक्षित हुनु हो भन्ने बुझेकी डंगोल आफूले पढेका र सिकेका कामहरु कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा अलमल्ल पर्थिन । तर अहिले उनले राजनीतिक यात्रामा आफूले सिकेका कामहरु प्रयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेकी छिन्।
सानैदेखि काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउने सपना देख्नुभएका डंगोलले काठमाडौंवासीको अपेक्षा बुझेर अगाडि बढ्दै छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । युट्युवमार्फत उनले नेपाल भाषा र रञ्जना लिपि सिकाउने गर्छिन ।
राजनीतिक यात्राको क्रममा विभिन्न मिडिया अन्तर्वार्ता दिँदा उनले राजनीति व्यापार होइन, यो समाजसेवा र विकास निर्माणसँग जोडिनुपर्ने बताएकी छिन् ।
यस्तै, डंगोलले समाजसेवा आफ्नो जीवनको मूल उद्देश्य भएका कारण त्यसलाई मूर्तरुप दिन राजनीतिमा आएको र आर्थिक समृद्धि, उन्नत समाजको विकास र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने राजनीति पनि उन्नत बन्छ भन्ने भनाइ राखेकी छिन् ।
विशेषगरी काठमाडौंमो नेवार समुदायमा नै रहेर काठमाडौंको विकास गर्ने योजना लिएर अगाडि बढ्दै गरेकी सुनितालाई वृद्धदेखि आजका युवाहरुको साथ र सहयोग रहेको देखिन्छ । उनी काठमाडौं स्वरुपदेखि बदल्नेदेखि महिला अधिकारका लागि आवाज बन्ने छिन् भन्ने हरेक महिलाको विश्वास छ ।
यसरी विभिन्न कार्य शैलीबाट चर्चा चुमेका डंगोलले काठमाडौं महानगरको उपप्रमुख बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छिन् । उनी मतान्तरको हिसाबले यो स्थानीय तहमै कीर्तिमानी विजयी उम्मेदवार हुन् ।
निर्वाचित आयोगले औपचारिकरुपमा महानगरको प्रमुख र उपप्रमुख निर्वाचित भएको घोषणा गर्न बाँकी भए पनि गणना गर्न मतको आधारमा उनीहरुको विजय निश्चित छ ।
२ बैशाख २०७८, बिहीबार १२:४२
काठमाडौ । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र…
पर्वतका किसान अलैची खेतीतर्फ आकर्षित
१५ पुष २०७७, बुधबार १८:१५
७ असार २०७७, आईतवार ०८:२४
काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशमा आज १६ जना कोरोना…
अर्जेन्टिना र कोलम्बिया कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनलमा
२० असार २०७८, आईतवार १२:१८
इक्वेडरमाथि सानदार जित निकाल्दै अर्जेन्टिना…
२८ चैत्र २०७७, शनिबार ०८:३६
भक्तपुर : सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको…
सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था र राष्ट्रिय समस्याको समाधान समाधान गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको छः प्रम
२७ बैशाख २०७८, सोमबार १६:०२
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले…
भारतीय ज्यादतीविरुद्ध चुइक्क बोल्न नसकेको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार उल्टै भारतको चाकरीमा…
चिकित्सा शिक्षामा तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै बिद्यार्थीहरु आन्दोलित
चिकित्सा शिक्षामा सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै बिद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन्…
अछामको साँफेबगर नगरपालिका एक हप्ताका लागि सिल
अछाम : अछामको साँफेबगर नगरपालिका एक हप्ताको लागि सिल हुने भएको छ। साँफेबगर नगरपालिकाले मंगलबार साँझ…
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘नेकपा’ को नाम विवादबारे सर्वोच्च अदालतले आज फैसला सुनाउँदैछ ।…